トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Ny tale sy ny fahalianana ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina tetika
Rehefa miaraka amin 'ny lehibe indrindra ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra, dia hamaly rafitra izay ny lehibe indrindra sy ny fahalianana tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra izay ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny mpanjifa bola.
dia azo inoana fa maro-fampiasana ny toa mendrika, fa raha tsy mahatsiaro mafy toy izany endri-javatra, dia tsy maintsy ho fantatsika fa ao amin'ny toe-javatra sasany tat? aoriana handray lehibe leferina. Koa dia mora fotoana hanofa
, aoka isika hiezaka ny hijoro mafy ny drafitra mandra-hamaly.
mifandray / ny lehibe indrindra ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina
mifandray / mahay mandanjalanja tsary tena sy ny fahalianana-tsipika mahitsy hamaly rafitra
ho an'ny lehibe sy ny fahalianana ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina
sy ny tombontsoa lehibe indrindra ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra, nindramina fa ny vola, dia fomba iray mba hamaly ny vola azo avy hahamaro anankiray isan-jaton'ny.
tena ny mpanjifa fitantanam-bola, amin'ny fomba maro ny toe-javatra mba ho ampiasaina amin'ny karatra toy ny fampindramam-bola, fa hamaly amin'ny kajy rijan ny "trosa foana × tahan'ny" dia indexed, ny voalohany lehibe iray hamaly vola, hamaly koa izany no lasa fa ny lehibe indrindra amin'ireo lafin-javatra izay hampihena ny habetsaky ny fiverenana araka ny mitombo.
Raha ohatra manokana
ohatra ny tahan'ny raikitra ny tena raikitra tahan'ny mihodinkodina amin'ny 5% mpanjifa bola, nindramina 200.000 Yen 12% isan-taona liana, kajy raikipohy dia lasa toy izao manaraka izao ianao.
ity dia Amin'ny ahitana vola izay mihatra amin'ny tale sy ny tombontsoa, ??dia fototra hampiroborobo ny mitovy mba hamaly isam-bolana. Raha nindramina tao
ny fepetra etsy ambony, ny fomba fikajiana ny olona liana mba handoavana isam-bolana dia ho kely.
200.000 Yen × (12% ÷ 12 volana)
Noho izany, Yen 8000 Miiba ny 2000 Yen mahaliana avy amin'ny vola no hamaly, izany dia hifantoka kajy toy ny lehibe.
toy ny soa azo avy amin'ny fototra sy ny tombontsoa soa ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina
lehibe sy ny fahalianana ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra, dia ahitana teny ny habetsahan'ny vola raikitra isam-bolana mba handoavana.
fiainana dia afaka ihany koa ny mampihena ny manimba ny, dia ho afaka ny hanao ny hamaly rehefa manomana.
ny vola miditra soa aman-tsara ihany koa ny fomba izay tsy tena marin-toerana toy ny tapa-potoana.
Ankoatra izany, na dia Hianao no nanao ny vaovao nindrana, soa ihany koa satria ny enta-mavesatra tsy ho lehibe loatra.
habetsahan'ny vola isam-bolana, satria izay tapa-kevitra ny tahan'ny vola handoavana ny trosa voalazan'ny tsirairay, mety ho tsy dia hisy fiantraikany ihany koa ny fandoavam-bola raha misy amin'ny lafiny sasany ny fidiram-bola tapaka.
Ankoatra izany, satria misy be dia be ny orinasa dia ankapobeny mba ho ampiasaina amin'ny voalamina ho repayments, dia miavaka amin'ny mora ny mahatakatra ihany koa ny isam-bolana hamaly tsingerin'ny.
1 volana tsirairay, ary isaky ny 35 andro, dia miankina amin'ny orinasa, satria Azo miray mba Hijery amin'ny voatondro avy eto, tsy mila miahiahy momba ny, toy ny manadino handoa.
fatiantoka ny fototra sy ny tombontsoa tahan'ny raikitra-mihodinkodina
toy ny fatiantoka ny fototra sy ny tombontsoa tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra, fa tsy hamaly mafy manao drafitra, misy teboka izay lasa maharitra nindrana. Fa ny fampiharana foana
tahan'ny mindrana Raha jerena ankapobeny ny mizana, tsy ho 0 raha tsy mandoa vola miaraka amin'ny lafiny sasany.
Ankoatra izany, araka ny isan'ny taona fandoavam-bola mitombo, dia afaka ihany koa dia ahitana tombontsoa sy ny fatiantoka ny mitombo be.
ary satria misy enta-mavesatra tsy isam-bolana, fa tsy niverina ihany ny kely indrindra amin'ny vola izay omena, dia zava-dehibe ny mandoa vola bebe kokoa raha misy sisiny eo amin'ny vola.
toy ny mpanjifa bola madinika sy salantsalany
, orinasa izay tsy ho nanoratra ny antsipirihan'ny ny hamaly drafitra ihany koa ny tsy mahazatra. Ho an'ny
hiverina tsy milaza ny isan'ny andro ny orinasa, dia tahaka ny azy ireo tsara fanahy rehefa triatra, hisy koa hitohy ho isan'andro miverina ihany no mahaliana.
koa mba hanafoanana ny olana toy izany, toy ny hanolotra ny fandaharam-potoana amin'ny ao an-trano na ao anatin'ny fifanarahana pejy, dia hoy ny orinasa hisafidy ny mendri-pitokisana zava-dehibe.
lehibe sy ny fahalianana ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra dia natao mba hamaritana toy ny hamaly ireo ny iray isan-jaton'ny ny trosa. Tamin'ny fotoana
vola, dia ho nandoa ny fahalianana miaraka amin'ny tale, dia ho ny endrika izay ho voampanga ny tontalin'ny vola isam-bolana.
ny tale sy ny fahalianana ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra, na ny habetsahan'ny vola handoa raikitra isam-bolana, misy tombony toy ny enta-mavesatra na latsaka, rehefa nindrana vaovao.
ny ankilany izay, Misambotra ny raharaha izay lasa lava be ny fotoana, nanao be ihany ny fotoana mba handoavana ny zanabola, toy ny misy ihany koa ny tombon-dahiny.
hiverina mafy ny tale raha afaka miverina, izany angamba no kardinaly fitondran'ny rehefa mampiasa ny tale sy ny fahalianana tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra.